अन्त्येष्टिका लागि लगिएको शिशु चल्मलाएपछि अस्पताल फर्काइयो | Ratopati
बिहीबार ५ मंसिर, २०७६ Thursday, 21 November, 2019
personएजेन्सी exploreचितवन access_timeसाउन २६, २०७६ chat_bubble_outline0
देवघाटमा अन्त्येष्टिका लागि लगिएको शिशु चल्मलाएपछि पुनः अस्पतालमा फर्काइएको छ । सँगै मृत्यु भएको भनी गाडिएको अर्को शिशुलाई उत्खनन गरी प्रहरीले परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याएको छ ।
अस्पताल फर्काइएको शिशुको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । घटना शङ्कास्पद देखिएपछि परिवारका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। पक्राउ परेकाहरु शिशुका बुबा, फुपू दिदी र थप एक व्यक्ति रहेका छन् ।
अनुसन्धान भइरहेकाले पक्राउ परेकाहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । जन्मिएका दुईमध्ये ठूलो एक किलो २०० ग्रामको शिशुको निधन भएको हो भने ८०० ग्रामको शिशु जीवित रहेको मल्लले बताए । घटना शुक्रबार भएको हो । बिहीबार ती बच्चा जन्मिएका थिए । गर्भ रहेको सात महीनाको समयमा जुम्ल्याहा शिशुको जन्म भएको थियो ।
उपनिर्वाचन तयारीबारे कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई जानकारी
जनकपुरमा तिम्ल्याहा शिशुको जन्म
चर्को आलोचित तर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा बचे अर्थमन्त्री !
न्यायाधीश सिफारिसप्रति थारु कानुन व्यावसायीको आपत्ति
पेसेन्ट सेफ्टी मापदण्डअनुसार उपचार गर्न चिकित्सकलाई काउन्सिलको अनुरोध
‘च च हुई’ ले गराउँला त मिरुनालाई हिट ?
सरकारका प्रवक्ताको चेतावनी: ‘हातमाथि पर्दा तरवार, तल पर्दा म्याउँ नगरोस् काँग्रेस’
नवनियुक्त श्रममन्त्री यादवद्वारा पदभार ग्रहण (फोटोसहित)
उपेन्द्रकै सल्लाहमा मन्त्रालय हेरफेर, पार्टीमा अन्योल !
सकारका प्रवक्ताको प्रश्न : पैसाको चलखेल गरेर मन्त्री बनायो भनेर कसले आरोप लगायो ?